IApartment yale mihla kwiZiko ecaleni kweTHERMAL
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLucie & Vojtěch
Indlu yanamhlanje exhobe ngokupheleleyo embindini ecaleni kwehotele iThermal (100m).
Indawo yokuhlala ikwimitha engama-300 ukusuka ePrague-isikhululo sebhasi saseKarlovy Vary kunye nesikhululo seenqwelomoya saseKarlovy Vary. Kunokwenzeka ukuba ufike kwindawo yokuhlala ngeenyawo.
Ukuba uqhuba ngemoto, siya kunika ulwazi apho ungayimisa khona imoto yakho.
I-Apartment ayitshayi, i-wifi yasimahla.
Le ndlu ikwindawo yokuqala yabahambi ngeenyawo kwi-Hotel Thermal, apho unokuhambahamba ecaleni kwekholoni, imithombo ye-spa okanye amahlathi e-spa.
Ivenkile enkulu (iBill okanye uAlbert), iMcDonald's, okanye i-Elisabeth Spa inokufikelelwa kwimizuzu emi-3, apho unokufumana khona iphuli yangaphakathi, i-sauna kunye noluhlu olubanzi lonyango lwe-spa.
Indawo yokutyela ekufutshane ilungile kwigumbi elingaphantsi kwendlu (i-cuisine yaseIndiya), kukho ezinye iindawo zokutyela ezininzi kwindawo ejikeleze iimitha ezingama-300 (siya kucebisa ngovuyo).
Ekufikeni kwakho, unokupaka ngqo phambi okanye emva kwendlu ngexesha elifunekayo lokukhulula umthwalo wakho (ukupaka kuvunyelwe kuphela). Iimitha ezili-150 ukusuka kwindlu kukho iindawo zokupaka ezimbini ezihlawulelwayo, indawo yokupaka yasimahla ifumaneka ngobusuku.
4.94 · Izimvo eziyi-160
Ezinye iingcebiso zokuhlala kwakho :)
Ukuba uthanda ukubukela, yiya apha:
ungasebenzisa indlela yentambo ukuya apho. Kuluhambo oluhle ukuya kwisikhululo esisezantsi esixekweni, unyuke kwaye uhambe ngeenyawo endulini.
kukho ichibi lokuqubha likawonke-wonke, i-sauna kunye ne-whirpool (i-sauna yahluliwe);
kukho i-sauna yabucala ene-whirpool, (qinisekisa nje ukuba ubhukishelwe);
ukuba ufuna ukonwabela, le yindawo yokutyela ekwihotele yeenkwenkwezi ezi-5, kukho i-gastronomy emnandi. Amaxabiso aphezulu kancinci, kodwa singathethathethana nge-10% isaphulelo (sazise nje ixesha ofika ngalo apha). Kukwakho i-wellnes kunye ne-spa apho, ukuze ube nexesha elimnandi apha (kwakhona singakunceda ngayo yonke into elapho - ubhukisho njl.njl).
Okanye ungazama indawo yokutyela embindini: iSpunt kunye neQhosha (iBurgers), iBecherplatz (iCuisine yaseCzech), iSakura (Sushi).
Ukuba uthanda ubhiya, kufuneka uye kwindawo yokutyela yaseNaroďák, apho i-Pilsner ingcono kakhulu kwisixeko.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda uqhagamshelane nathi :)
Umbuki zindwendwe ngu- Lucie & Vojtěch
Ukuba uhamba nabantwana, siyavuya ukulungiselela iingcebiso zokuthimba abantwana bakho (ngokwenani labantwana kunye nobudala).
ULucie & Vojtěch yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Karlovy Vary